Oduu/ news Bilisummaa Oromiyaafi Nasirii Diini Islaama - Home | Facebook
See more of Oduu/ news Bilisummaa Oromiyaafi Nasirii Diini Islaama on Facebook
7,645 people follow this
Community · Environmental Conservation Organization
Oromian DAILY News
Sagalee Ibsituu Dukkanaa
Oduu/ news Bilisummaa Oromiyaafi Nasirii Diini Islaama
· January 21 at 3:21pm ·
Tokkummaa keenya tikfachuun amma! Bakka garaagaraatti
wanti muldhatu, wanti dhageenyu tokko tokko tokkummaa
Oromoof waan tolu miti. Tokkoffaa, ijoollee qeerroo keenya
bakkeewwan tokko tokkotti bakka lamatti hiruudhaan
sadarkaa wal-lolchiisuurra gahaa jira ammas diinni...
· January 21 at 3:18pm ·
Of-eeggannoo ..Haaloon nu hin baasu! Qabsoo jabaatu
harkaa nu qaba. Qabsoo kana bakkaan baasuu qabna.
Moo'atuuf wal-tumsuu nu barbaachisa. Keessoo keenyatti
wal-dhabuun hin ta'u. Yoo wal-dhabnes kaayoo waloof jecha
dubbii nagaan fixatuu qabna. Wal-loluun nuuf hin ta'u. Sareen...
wal-nyaattu waraabessa hin argitu. Qabatamaatti ummati
keenya waliif tumsuu malee wal miidhuun irraa hin tolu. Garuu
nami maleekaa miti. Daguutti ykn wallaalatti wal miidhuun hin
hafu. Gariin rukutee qaama wal miidha. Kuun qabeenya wal-
dhoowwata. Kan wal ajjeeses ni jiraata. Kun borus hin oolu.
Wanti hamaan haaloo qabatanii dhufaa-darbaa wal-nyaatu
dha. Gandoota garii irraa waan hin malletu dhagayama.
Namooti miidhaa darbeef haaloo walitti qabatan jiru.
Fakkeenyaaf Shawaa Kaabaa, Aanaa Dagam, Ganda Leemman
Caarrakii keessatti sababa ajjeechaa Obbo Dabalaa Xaafaaf
ummati gosaan wal-qoodee walitti gamaa jira jedhama. Haalli
akkasii bakka biraas jiraatuu hin oolu. Kun qabsoo keenyaaf
gufuu guddaa dha. Sakaalee nu kuffisa. Kanaafuu dafee
furamuu qaba. Nami nurraa du'e nu marara. Lammii ofiif
mararamuun namummaa dha. Garuu lammii biraa ajjeesuun
nama nurraa du'e hin fayyisu. Maree maree numatu
miidhama. Akka sabaatti gaafa laallu nama lama dhabuurra
nama tokko dhabuu wayya. Oromoon kanaaf ajjeechaa lammii
gumaan fixata. Gumaan waa lamaaf tola. Gama tokkoon wal-
fixiinsa lammii ittisee kisaaraa hawaas-diinagdee hir'isa.
Gama kaanin ammoo lammii wal-dhabe araarsuun
tokkummaa sabaa jabeessa. Amma qaawwa cufatuu qabna.
Jalqaba wal-miidhuu haa dhiifnu. Miidhaa waliif haa obsinu.
Bakka hammaattetti dubbii araaran haa fixannu. Yoomillee
haaloo wal-bahuun hin ta'u. Sun diinaaf karaa banuu dha.
Yeroo kamuu diina dhiisanii wal luluun gowwummaa dha.
Keessattuu amma wanti akkasii ummata keenyaaf kisaara
guddaa dha. Amma maaltu mala? --Namuu dubbii kana firaa-
hiriyaa ofii yaa hubachiisu. --Nami wal-dhabe ofiin yaa
araaramu. Dubbii jabduu jaarsi bakka jirutti haa fixu. --Qaami
mootummaa bakka rakkoon jirtu hordofee dafee furmaata yaa
kennu. --Ummati, keessattuu qeerroon bakka jirutti dubbii
akkasii dura haa dhaabbatu. Namuu bakka jirutti gahee ofii
haa bahu. Waan qabsoo keenya gabbisu yaa hojjannu. Waan
qabsoo faallessu ammoo haa ittisnu. Taa'anii wal-eeguun hin
ta'u. Ofiin ofiif hojjatuu!
· January 21 at 3:13pm ·
Waa’ee Oromoota Goojjam kana beektuu laataa?
Yeroo ammaa Lafti Goojjaam jedhamee waamamu dur durii
irra jireessaan Oromootatu irra qubatee jira. Yeroo booda
garuu, dhiibbaa mootota adda addaatiin saboonni adda addaa
gara kana dhufanii akka qabatan godhameera....
· January 19 at 1:29am ·
"Ani amma Godina baalee Keessaa siif barreessa. Sababa
Network dhabneen Information Erguu hin dandeenne. Guyyaa
Lama dura barraaq waaqdarar ture. Dubartiin ulfaa takka
daa'ima wajjiin Beelaafii dheebuu akkasuma qorraafii Aduun...
Osoo Ciniinfattuu Otoo ijji tiyya agartu Lubbuun keessaa baate.
Achi dhaquu kootti nan gaabbe jireenni koo na jibbisiise. Haala
wal fakkaataa keessa dubartoonni fi daa'imman Guyyarraa
du'an Lakkoofsi akka dabalu gaafii hin qabu.
"Ummanni oromoo maaf Nutti callise Jedhan ummanni kun.
Warri dhiiraa Halkaniifii Guyyaa garaa qullaatti Qawwee
muraasa qaban qabatanii daangaa eegaa oolu , bulu garaa
qullaa. Bulchiinsi mootumaa naannoo oromiyaafi Aanaanis
quba nuhin qabu jedhaa jiru.
"Ummataan nuuf gahi dhaamsa kana Amaanaa rabbii."
Oduu/ news Bilisummaa Oromiyaafi Nasirii Diini Islaama updated their profile picture.
""Ejjennoo Qeerroo Amboo.
Agzi kuma muraasaan tarii milionaa gad kuma
300 gadiin ummata oromoo miliona 50 fixuun/
mo'aachuun hin danda'aamu.
Akka addunyaa tti mootummaan saba biyya tokko...
fixe hin jiru.
Ummanni jiraachuu itti Fufa.mootummaan abbaa
hirree Ni injifatama.
Seenaa biyya addunyaa hanga ammaa ti jiruu ti.
Yaroo ammaa kana akka feedhii fi sadarkaa
qabsoo ummanni oromoo irraa jirruu yoo ilaallee
saba oromoo kana bilisummaa dhugaa malee
deebiin kamuu akka duubaa tti deebisuu hin
dandeenye eenyuu ragaa ba'uu ni danda'aa.
Walumaa galatti namoonni tokko tokkoo
command post iin deebi'ee jira.qabsoon oromoo
kana booda Ni dhaabbata.carraa gaarii ture haalli
kana dura ture jechaa jiru.
Oromoon itti fayyadamuu Ni danda'aa ture. Kan
booda qabsoon kun Ni dhaabbata jedhanii
Warreen harki caalu garuu kana booda qabsoo
kana kan dhaamsuu danda'uu deebii bilisummaa
dhugaa qofa akka ta'ee of itti amanamummaa
guutuun mirkaaneessaa jiru.
Eyyee kun karoorra qerroo isa dhumaa ture.
Ammas hanga deebiin dhugaa lammii oromoo
dammaqee dheebuu bilisummaa qabuu kana
duubatti deebisuun gonkuma hin danda'uu.
Adduunyaa Kana Guutuutti osoo imaltee barbaadaa ooltee
kan akka keetii eessattuu arguu hin dandeessu. Ati nama
addaati, dandeettin kees, kennaan kees akkasuma adda~
Kanaafuu eenyuunuu of hin madaalchisin, kennaa kee ofuma...
kee keessa barbaadii argadhu, namaanis of wal hin
Wanti guddaan kamiyyuu tokko jedhamee akka eegalamu hin
irraanfatin ~ guyyama tokkoon waan hunda argachuu qaba
jettee hin hawwin;
Karaa gabaabaa hin filatin ~ karaan qaxxaamuraa
gabaabaa fakkaata malee dhumni isaa hin bareedu. Karaa
qaxxaamuraatiin hayyuu, dureessa, qabsaayaa, rogeeyyiifi kkf
ta’uuf hin yaalin;
Gorsa namaa dhageeffadhu ~ garuu yaada/ qeeqa hamilee
kee si qancarsaniif eddoo hin kennin. Kan si gorsu hundi
beekaa akka ta’etti hin yaadin. Gorsaan guddaan ati qabdu
suma mataa kee ta’uummoo hin irraanfatin;
Yaadaf Hawwii kee hin daangessin ~ hamma lubbuun
jiraattetti, hamma aarsaa barbaadamu kanfalatetti wanti ati
galmaan ga’uu hin dandeenye hin jiru. Kaayyoo kee, abjuukeefi
fedhiikee hin daangessin ~ bal’isii yaadi, guddisii hawwi,
guyyaa tokko akka hawwiin kee dhugoomus hin shakkin;
Gufuun hundi si kuffisee imala keerraa si hambisa hin
se’in ~ eddoo tokkotti si’a lama hin gufatin malee ofdura
tarkaanfachaa gufachuun waanuma jiru. Kanaafuu, gufuu
kamiifuu hin jilbiifatin;
Waan har’a baay’ee argachuuf hawwite tokko yoo dhabde
hin gaddin ~ tarii ati hin argine/ hin xiinxalline ta’a malee
balaafi hamaan waan sana keessa jiru egeree keef gaarii ta’uu
Magaalaa Moqaadishoo keessatti Boombii
Konkolaataa irratti kiyyeeffameen lubbuun
namoota 10 dabruun gabaafame.
Moqaadishoo keessatti eegaa haleellaan lubbuu
namoota hedduu galaafatee asitti ammas torbee
lama booda guyyaa hardhaatis, boombii
Konkolaataa lama irra kaahameen lubbuun
namoota 10 darbuu fi namoonni 8 ol midhamuu
Odeeffannoo ni addeessa.
Namoota haleellaa kanaan ajjeefaman jiduu
miseensi Parlaamaa Somaaliyaa duraanii tokkoo fi
hogganaan poolisaa tokko kan argaman tahuun
Hogganaan Poolisii Alii Muhammad , Haleellaan
kun Hoteela Nasaa Habluud jedhamu kan
naannawa masaraa mootummaa Somaaliyaatti
dhihaatu irratti kan xiyyeefate tahuu fi naannuma
sanitti Haleellaa boombii Konkolaataa irratti
hidhame kan birootis kan raawwatame tahuu
Anaadooluu Niiwusiitti hime.
Haleellaa jalqabaatiin lubbuun namoota 10 darbuu
fi namoonni hanga 8 midhamuu gabaasni
dhaabbata odeeyfannoo Somaaliyaa irraa bahe ni
Haleellaa torbe lama dura raawwatameen lubbuun
namoota 358 oli darbuun ni yaadatama. Haleellaa
sun kan Seenaa Somaaliyaa keessatti yeroo
jalqabaatiif lakkoofsi namoota hedduu itti
Torbee as deemu kana yoo milkoofte jarittiin,
waraanaan bulchuuf wixinee seeraa paarlamaatti
gaafa 25/02/2010 dhiyeessuuf karoorfatte jedha
oduun qabatamaan tokko. Kanaafuu, jarittiin...
guyyoota jahan as adeemaa jiran kana keessatti
dhiiga baldhinaan dhangalaasuuf karoorfachuu
ishee odeessi nu gaheera. Kanas kan gootu
jeequmsa hamaa kaasisiisuudhaan, dukkana ykn
dhoksaan nama ajjeesuudhaan, sabaa fi
sablammilee wal fichisiisuudhaan, qabeenya
mootummaa naannoos kan federaalaas fi kan
dhuunfaad gubsiisuudhaan, yunivarsitiiwwan
keessatti lola saboota gidduutti kaasisuudhaan,
manneen barnoota sadarkaalee hunda keessatti
hookkara kaasuudhaan, fi kanneen birootti
fayyadamtee dhiiga dhangalaasuufi. Kanaafuu, of
eeggannoon bor irraa kaasee guyyoota jahan
dhufaniif godhamuu qaba. Naannoo ofii eenyu
akka jiru to'achuu, ergamtoota diinaa poolisii
Oromiyaaf dabarsitanii kennuudha. Sabaa fi
sablammoota Oromiyaa keessa jiraatan hundaaf
eegumsi yoomiyyuu caalaa godhamuufii qaba.
Qabeenya mootummaa fi dhuunfaa jiran hundaaf
eegumsi godhamuufii qaba. Hiriira waan jedhamu
kan kaasu diina dhiiga keenya dhuguuf fiigu ta'uu
hubannee, namoota hiriira waaman, jeequmsa
kakaasan dursaatii adda baafadhaatii poolisii
Oromiyaaf kennaa. Lafa gabaaf eegumsi gahaan
godhamuu qaba. Qeerroon, poolisiin, bulchiinsii fi
uummanni tokko ta'uun nageenya Oromiyaa
eeguun bor ganama irraa kaasee hojiirra oola.
Yoo tasgabboofne, waldhageenye, nageenya
naannoo keenyaa eegganne, olola sobaa irraa yoo
of eegganne, dhugaa waan qabnuuf ni injifanna.
Akeekkachiisa fi ergaa jajjabaa !!!
Ergama haaraa Saamtonni TPLF basaastota
isaaniif kennan.guyyaa 18/2/2010 irraa eegalee
kan hojiirra oolu....
1.Saboota Oromiyaa keessa jiran irratti tarkaanfii
2. Poolisii Oromiyaa maqaa m balleessuu akka
waan dhaabbilee Shororkeessummaan
farrajamanii waliin dhaabbatanii jiranitti hololuu fi
Suuraawwan isaanii Alaabaa dhaabbilee kanaan
irratti dhoobuun mul'isuu
3.Gaggeessitoota Dh.D.U.O irratti tarkaanfii
4.Dhaabbilee investimentii fi abbootii qabeenyaa
naannoo keenya keessa jiraatan irratti fudhachuu
akkuma bara 2008 barbadeessuu. Kuni hanga
Onkoloolessa 29 erga raawwateen booda
Onkoloolessa 30 Paarlaamaa walitti qabuun
Labsii yeroo hatattamaa labsuudha.
Ergaa kana # share haa gonuu!
ወያኔ በመላው ኦሮሚያ ጠንከር ያለ አዲስ ጥቃት ለመሰንዘር
ዝግጅት ማጠናቀቁን ታማኝ ምንጮች አመለከቱ። ከጥቅምት
18 2010 ጀምሮ የሚከተሉትን እርምጃዎች ለመዉሰድ ሰፊ
1. ኦሮሚያ ውስጥ በሚኖሩ ብሔር ብሔረሰቦች ላይ ግዲያ
2. ለሰላም የቆሙ የኦሮሚያ ፖሊስ አባላትን ከጸረ-ሰላም
ኃይሎች የቆሙ በማስመሰል የስም ማጥፋት ፕሮፓጋንዳ
ማካሄድና ፎቶግራፋቸውን ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ዓርማ ጋር
4. በኦሮሚያ ክልል ያሉ ባለሀብቶችን ንብረት ማቃጠልና
5. ከላይ የተዘረዘሩ እርምጃዎችን እስከ ጥቅምት 29 ቀን
2010 ማጠናቀቅና ጥቅምት 30 ቀን 2010 ዓ.ም.
ፓርላማውን በመጥራት በጉዳዩ ላይ ማስወሰን።
ስለዚህ ሕዝባችን ይህን ጉዳይ ነቅቶ እንዲከላከል ጥሪ
ቀርቧል። ሼር አድርጉ! ሼር አድርጉ!"
#OromoProtests ISIN HOO? Arsii Diida'aa, Jimma, Eluu Abbaabor, Adaamaafi Dirree Dhawaa, bakkoota muraasa malee falmaa bara kana ummanni keenya godhaa jiru keessatti hirmannaa hammas jedhamu hin goone. Kan marsaa kanaa keessaa hafuun garuu awwaalcha sabaa irraa hafuudha. Qeeroofi manguddoon, shamaraafi haawwan bakkoota armaan olii keessa jirtan wlagaafadha, saba keessan waliin ejjadhaa.
Namonnii guyyaa har'a Waregamaan Nama 678 Ga'e jiraa
Kan du'a fi Hafa jiddu jiruu
kan Gochi sukkanessan irratti Rawwatame nama 423
Kannen Madaa Gurguddan irra ga'e 870...
Via # Beknan_Rabira .
# Arsiin Lixaa akkanatti itti fuufnaan yeroo dhihootti harka mootummaa woyyaanee jalaa baafatti jedheen yaada. Wanti ummatni Oromoo Godina Arsii Lixaa bakkeewwan garaagaraatti raawwachaa jiru daraan nama boonsa.
1. Agaazii isaanitti ramadame qawween, eeboon, fi waan qaban hundaan dura dhaabbatanii ofirraa ittisaa jiru. Ajjeesaas madeessaas jiru. Aanaa qoree keessatti ummatni Oromoo agaazii eeboo dhaan woraanaa jira. Isa Shaallaa isinuu qub...a qabdu.
3. Ilma Oromoo ta'ee kan diina nutti waamu, masakkee ganda keessaan deemaa nu ajjeesisu hunda tarkaanfii irratti fudhatamuuf nuti itti hin gaafatamnu jedhu. Ammas nama yoo ajjeesise gumaa akka seera Oromootti Kan kafalu agaazii osoo hin taane warra isaan fide jedhu. Seera mataa isaanii tumataniiru.
8. Gandoonni baadiyaa hedduun bulchiinsa ofirraa ariitee kaan amansiiftee Manguddootaf qeerroon bulaa jiru.
Waliif dabarsaa # Share